Ciyaarihii Jaaliyadaha Somalida ee UK & Talyaniga oo la soo gabagabeeyey (Sawiro) – SBC
Ciyaarihii Jaaliyadaha Somalida ee UK & Talyaniga oo la soo gabagabeeyey (Sawiro)
Posted by editor on April 18, 2011 Comments
Dalka Talyaaniga ayaa waxaa mudu asbuuc ka socday ciyaaro aad u xiisa badan oo udhaxeyay jaliyadaha kala dhisan dalalka UK iyo Talyaaniga tartankasi ayaa waxaa loogu magacdaray isboortiga qurba jookta Soomaliyeed.
Ciyaarahasi oo ahaa ku xiiso badan waxaa kasoo qeb galay dadweyne badan oo xiiseya isbooriga halkaasoo ay wacdaro ay ka muujiyeen ciyaryahanadii ay soo safeen jaliyadaha kala socaday dalalka UK iyo Talyaaniga.
Ciyaartii ugu horeysay ayaa waxaa fooda isdaray jaliyad UK iyo kox ka socotay dalka Talayaniga oo aheyd ciiyar saxiibtinimo waloow ay marti galisay jaliyada Soomaliyed ee ku nol dalka Talyaniga halkaasi ay wacdaro isboorti ay kasoo sareen nadiga ka socaaday jaliyada UK ciyarata mar kuu garsooraha Weerow uu seriga kudhaftay ayaa waxaa ay bilaabeen ciyaryahanda kasocady Talyaniga in ay mujiyaan dardar eyna banooniga ayaga mamulaan ayaa waxaa ay lugata ugashay ciyarhanada kasocday jaliyada UK durba waxaa ay saxiixeen gool wacdaro leh halkasoo ey ku niyajabeen nadigii Talayaniga qebtii hore ciyarta ayaa waxaa lugu kalanasatay 3 iyo 0, oo ay guusha ku hogaminaysay nadiga jaliyada UK.
Markii la isku soo laabtay ciyaartii ayaa ay hadana ku weraren halkoodi nadigii Talyaaniga ciyartii ayaa waxaa ay ku soo gaabagaboodaay lix iyo ebar oo ay guusha ay ku raacday naadiga UK.
Maalinti labaad ayaa waxaa is haleelay jaliyada Soomaalida ee ka dhisan talyaniga iyo jaliyada UK waxaa ayna aheyd ciyaar aad u xiisa badan waxaan ay ku soo gabgabooday 7- 0 oo ay guusha ku racday naadiga jaliyada UK.
Maalintii sadaxaad ayaa ciyaar aad u xiisabadan ayaa waxaa iskaga hor yimid jaliyada Milaano ka dhisan ee dalkaa Talyaaniga waxaa ay is heleen jaliyada ka dhisan Tuskano magalada Firenze ee dalka Talyaaniga waxaa ayna aheyd ciyaar aad loo wada jecleystay dawashadeeda ayna sooban dhigeen labada koox ciyar wanaagsan, Waxaana ay kusoo gabgabowdaybar barbar dhac 0-0.
Ciyaaratii ugu dambeysay ayaa waxaa is helay jaliyada UK iyo jaaliyada ka dhisan Talayaniga waxaana lugu dur duriyay Jaaliyada Talyaniga ayadoo loo diray bastada in ay si fiican uso cunaan.
Ugu dambeyntii ciyaarahasi ayaa waxaa qiimeyn balaaran sameenayay madaxdii isboorti ee ka soo qebgalay ciyaarahaasi waxaana ka mid ahaa C/qaadir Soomarey oo ahaa gudoomiya ku xigeenka diyasbarad ama qurba jookta Soomaliyeed iyo gudoomiyaha qurba joogta Axmed Nuur Faarax (Seygaa Ruushka) oo ahaa musuulkii markasi watay wafdigii balaarnaa ee soo gaaray daalka Talyaaniag ciyaaro saxiibtinamana la yeesha jaliyadaha ka dhisan gobalada dalka Talyaaniga.
Mar aan la dhaxmar meykarafoonka dadweynihii u soo dawashada tagay ciyarahaasi ayaa waxaa ay ii sheegeen in ay ad ugu qancsan yihiin ciyaarihii halkasi ka dhacay iyo sida loogu badiyay jaliyada Soomalida ee ku dheleysay magaca gobalka tuskano oo aheed halkii martida logu ahaa.
Gudoomiyah qurba joogta Isbortiga Soomaliyed Seyga Ruushka ayaan asagana waxaan wey diiyay dhowr su’aal oo ku adan tartamadan waxaa u iishegay in ay siil abalabayaan tartamada ceynkani oo kala ah isboortigana uu yahay isdhax galka bulshada isla markaana caafimaad u sii dheer yahay.
Sayega waxaa kaloo uu sheegay in haatan ay jecelyihiin inay qeybah isbortiga uu ka kooban yahay in an ku soo darno sida basket ball-ka , boodada, orodada marathon-ka iyo wax walibo oo isboorti ah ee ay bulshada ay cafimaad ka heli karto.
“ Waxaan kaloo mustaqabalk dhow ku hami weynahay in aan ciyaaro saaxiibtinimo in aan u tagno qarada Afrika anagoo mar horaba utagnay wadamo ka mid ah qarada afrika kana soo hooyinay guulo wax ku ool ah sida aan hadaba aan ugu soo hooyinay guulo” ayuu yiri halkani sidasina waxaa yiri gudoomiyah quba jooga Isboortiga soomliyeed Axmed Nuur Seyga Ruushka.
S/c walaalayaal ama boowayaal (SBC) waxaan leeyahay waxaad sameyseen horumar la taaban karo halkaas ka sii wada waxaan idiin rajaynayaa khayr badan
heeybad waxaa uleedahay dhulkaaga hooyee waa hees somaliyeed marka Qurba joogta waxaan leenahay dadkiina dhibta la Qaybsadoo dalka dib ugu soo laabta
bahda sbc waxad samayseen isbadal qiimo leh oo mudan in la idin lu mahdiyo waxan rajaynayaa in aad halka kasii wadaan